Puntland oo sheegtay in dastuurka federaalka aan lagu faafin karin Puntland inta laga xallilayo cilaaqaadka wada-shaqayneed ee Puntland & federaalka. – Radio Daljir
Febraayo 12, 2011 12:00 b 0
Garowe, Feb 10 – Wasiiru dawlaha dastuurka & arrimaha federaalka ee Puntland Dr. Cabdi Xasan Jimcaale oo ka qayb galay shir looga hadlay hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ah, xiriirka u dhexeeya Puntland iyo dawlada federaalka ah, iyo dhaqan-gelinta dastuurka dawlada federaalka ah ayaa sheegay in dastuurka dawlada federaalka ah aan lagu faafin karin Puntland, inta Puntland iyo dawlada federaalku ay isla meel dhigayaan dhawr qodob.
Qodobada uu xusay Dr. Jimcaale ayaa waxaa ka mid ah cilaaqaadka wada-shaqayneed ee u dhexeeya labada dhinac oo joogsaday bilawgii sannadkan.
Waxaa uu sheegay oo kale in marka hore ay tahay in la saxo qodobo ka mid ah dastuurka oo Puntland ay falcelis ka gudbisay.
Sidoo kale ayaa uu sheegay in Puntland ay doonayso in ay xubnaha uga mid noqodaya Puntland dawlada federaalku ay noqdaan kuwa matala shacabka, la tashina ku yimid, balse aan la iska soo xulan.
Dr. Jimcaale waxaa sheegay in Puntland ay ku hawlan tahay hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyadeed oo wejigii 1-aad uu gabagabo yahay, sannadka cusubna loo gudbi doono hirgelinta wejiga 2-aad ee magacaabida guddiga doorashada iyo hirgelinta axsaabta siyaasadeed. Waxaa uu tafaasiil ka bixiyey sida ugu haboon ee Puntland u hirgelin karto nidaamka dimuqraadiyadeed ee uu xusay in ay jiraan dhawr wadiiqo oo loo mari karo hirgelintiisa.
Waxaa uu ku adkeeyey in Puntland ay u taagan tahay midnimada Somaliya, sida keliya ee looga bixi karo dhibaatada Somaliyana ay tahay nidaamka federaaliga ah oo ka hanaqaada Somaliya.